Real oo 80 Milyan oo Euro ku dalbaneysa labo ciyaaryahan oo u dhalatay dalka France Waa kuwee Ciyaaryahanadaas? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Real oo 80 Milyan oo Euro ku dalbaneysa labo ciyaaryahan oo u dhalatay dalka France Waa kuwee Ciyaaryahanadaas?
Real oo 80 Milyan oo Euro ku dalbaneysa labo ciyaaryahan oo u dhalatay dalka France Waa kuwee Ciyaaryahanadaas?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-06-16 1:45 PM Warar soo baxay oo ay qorayeen maanta saxaafada dalka Spain ayaa sheegayo in kooxda Los Blancos ay wado qorshe ay kusoo qaadaneyso ciyaaryahanada kala ah Dimitri Payet oo u ciyaara kooxda West Ham United iyo K’Golo Kante qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Liecester City.
Real Madrid ayaa u diyaarineysa kooxda West Ham United 50 Milyan oo Ginni iyada oo dooneysa iney kaga soo qaadato Dimitri Payet, Kooxda Los Blancos ayaa fasaxi doonta James Rodriguez hadii ay ku guuleystaan helista Payet, sida lagu xusay wargska Football Espanya.
Dhanka kale kooxda Real Madrid ayaa wado qorshe ay 30 Milyan ugu soo qaadaneyso N’Golo Kante oo u ciyaara kooxda Liecester City, Kante ayaa dalab gaar ah ka helayo macalinka Los Blancos ee Zezou sida lagu xusay maqaalkan, waxa uuna macalinka reer France doonayaa inuu qad dhexe ka wada ciyaarsiiyo Casemero, Kante oo lagu daray Payet.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in kooxda Real Madrid ay wado qorshe ah soo gaba gabeynta heshiiska xidigahan kahor inta uusan idlaan koobka Qaramada Yurub oo si habsami leh imika ugu soconayo dalka France.